“Faysalow haddii aad xaaraan ku soo baxday tartanka ka hadh oo u banee xisbiyada kale” | Cadceed newssite
Jan 3,2012 Hargeysa(Cadceed)- Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Maaliyada Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid (Cadaani) ayaa jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay Guddoomiyaha Xisbiga Ucid, hadalkasoo la xidhiidhay in doorashadii uu ku soo baxay Xisbiga UCID ay ahayd xaaraan, Faysal oo doraad hadalkaas kaga khudbadeeyay madal Xisbiga UCID ugu dabaal degayay Xisbinimada uu dib u helay. Ayuu Wasiir-dawlaha Maaliyadda ku naqdiyay Guddoomiyaha Xisbiga Ucid, isla markaana uu ugu baaqay haddii uu xaaraan u arko inuu tartanka uga hadho cidda uu xisbiyada kale ee u soo baxay.
Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Maaliyada Somaliland Mr. Cadaani ayaa dhaar ku maray inaanay arag meel komishan yahay iyagoo afar wasiir ah, isla markaana aanay waxba ka jirin in Xisbiga Kulmiye doorashada faro-galiyay, isagoo markale arrimahaas ka hadlayana wuxuu yidhi. “Marka la leeyahay doorashadii khaladbaa ka yimi waa run oo anba waan qirayaa, laakiin doorashadu si xor iyo xalaal ah ayay u dhacday, natiijadeeda yaa leh ayaa imanaysa, waxa leh Komiishan Qaran oo doorashooyin hore soo qabtay oo khibrad lahaa, haddii markaa khaladaad yimi taas micnaheedu maaha doorashadu xaaraan ayay ahayd. Xisbiga Kulmiye iyo Xukuumaduna wax faro-galin ah kumay samayn, annagu Sanaag ayaanu joognay afar Wasiir ayaanu ahayn, wallaahi maanaan arag meel komishan yahay, manaan faro-galin. Laakiin khaladaadkii yimi Madaxweynihii Qaranku wuxuu yidhi guddi ayaan u saarayaa, waxaan leeyahay yaan laga hordhicin guddida Madaxweynaha, wixii ka yimi iyo ciddii khaladka lahayd waa la baadhaya. Laakiin doorashadu xor iyo xalaal ayay u dhacday, natiijaduna waa ka gaar oo adduunka oo dhan ayaa lagu murmaa.”
Hadalka Wasiiru dawlaha Maaliyada Cismaan Cabdilaahi Saxardiid, ayaa noqonaya masuulkii ugu horeeyay ee golaha Wasiirada ka mid ah ee si faahfaahsan uga hadla doorashadii iyo eedeymihii loo soo jeediyay Xukuumadda.